Sky Sport Oo Kashiftay Xaqiiqada Wararka Sheegaya In Ay Man United Ku Dhawdahay Saxiixa Matthijs de Ligt – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 26, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 0
Shabakada Caalamiga ah ee Sky Sports Matthijs De Ligt ayaa shaaca ka qaaday Xaqiiqda wararka sheegaya in ay kooxda Man United ku dhawdahay saxiixa daafaca kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Sky Sport oo soo xiganaysa ilo wareedyo ku dhaw kooxda Man United ayaa sheegay in ayna kooxda Man United wax niyad ah u hayn saxiixa daafaca reer Holland ee Matthijs De Ligt inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Waxa maalmihii ugu dambeeyay Matthijs De Ligt si weyn loola xiriirinayay kooxda Man United xilli ay Wararku sheegayaan in ay Man United dalab 70 Milyan oo euro ah miiska u saartay kooxda Ajax si ay u hesho saxiixa daafaca.
Si kasta ha ahaatee Shabakada ayaa sheegaysa in ay kooxda Man United wakhti hore isaga hadhay xiisaha daafaca reer Holland ee Matthijs De Ligt iyaga oo aan wax xiiso ah u qabin u dhaqaaqista saxiixa daafaca.
Shabakada ayaa sababta ku sheegtay in ay kooxda Man United haatanba ogyihiin rabitaanka xoogan ee uu Matthijs De Ligt u qabo ku biirista kooxda Barcelona.
Matthijs De Ligt ayaa soo jiitay indhaha ugu waaweyn yurub kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu soo bandhigay xilli ciyaareedkan isaga oo ugu cad-cad in uu ku biiro Barcelona.